August 2020 - Puntland Mirror Believable Media Website
August 30, 2020 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa Isniinta qorshuhu yahay in uu ka dego magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya, sida ilo-wareedyo katirsan dowladda ay u sheegeen bog wareedka Puntland Mirror. Kulan ka dhacay […]
August 27, 2020 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Kadib kulan ka dhacay magaalada Garoowe, Puntland iyo Jubbaland ayaa isku raacay in shir wadatashi ah lagu qabto caasimada Soomaaliya ee Muqdisho si loo gaaro xal siyaasadeed oo laysku waafaqsanyahay ee qabsoomida doorashooyinka […]
August 24, 2020 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta oo Isniin ah yimid magaalada Garoowe ee caasimada Puntland. Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa madaxweynaha Jubbaland ku soo dhaweeyay garoonka diyaaraddaha Garoowe. Ujeedka safarka madaxweynaha […]
August 22, 2020 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland iyo Jubaland ayaa sheegay in aysan qeyb ka ahayn heshiiska ka dhacay Dhuusamareeb u dhaxeeyay Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo qaar katirsan maamul goboleedyada, sida lagu sheegay war-saxaafadeed wadajir ah. Hoos ka […]
August 20, 2020 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Sii hayaha Wasiirka Waxbarashada Dowladda Federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Bare ayaa sheegay in dalka ka ceyriyay madaxii haayada caalamiga ah ee Care u qaabilsanaa Soomaaliya. Waraaq ka soo baxay xafiiska Goodax Talaadadii ayaa […]
August 17, 2020 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamada ammaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa soo afjaray weerar ay maleeshiyada Al-Shabaab ku qaadeen huteel kuyaala Muqdisho, sida ay sheegeen masuuliyiinta dowladda. Ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhimatay kadib markii dagaalyahano katirsan […]
August 16, 2020 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa maanta oo Axad ah la filayaa in ay tagaan magaalada Dhuusamareeb si ay uga qeybgalaan wejiga labaad ee shirka u dhaxeeya Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Dowladdaha Xubnaha ka […]
August 15, 2020 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Guddiga Kumeelgaarka ah ee Doorashooyinka Puntland (TPEC) ayaa maanta oo Sabti ah shahaadooyin siiyay 10 urur siyaasadeed kuwaasoo ka soo gudbay hanaanka diiwaangelinta. Guddoomiyaha Guddiga Kumeelgaarka ah ee Doorashooyinka Puntland Guuleed Saalax Bare […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Wasiir Dowlihii Madaxtooyada Puntland Maxamed Xasan Ciise ayaa maanta oo Sabti ah ku geeriyooday magaalada Garoowe kadib markii uu ku dhacay xanuunka coronavirus. Waxa uu noqonayaa xubintii labaad ee katirsan golaha wasiiradda oo […]
August 12, 2020 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Kulankii u dhaxeeyay Wasiiradda Maaliyada Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Dowladdaha Xubhaha ka ah ayaa maanta oo Arbaco ah ku soo gabogaboobay Muqdisho. Intii uu kulanku socday, masuuliyiinta ayaa ku heshiiyay $55 milyan oo […]